Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Wafdiga madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa lagu wadaa inay maanta ka qeyb-galaan xafladda caleemo saarka madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Madaxweyne Geelle ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu maanta dhagax dhigo dhismaha safaaradda cusub ay dowladda Jabuuti ka dhisaneyso magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Geelle ayaa ah madaxweynihii ugu horeeyay ee ka socda dalalka deriska ee soo gaara magaalada Muqdisho, iyadoona saacadaha soo socdo la filaayo inay magaalada Muqdisho soo gaaraan wafuud kale oo caalami ah.
Dhinaca kale, saacadaha soo socdo ayaa la filayaa inay magaalada Muqdisho soo gaaraan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Deselegn.
Ammaanka goobta ay xafladdu ka dhaceeyso ayaa ah mid si weyn loo adkeeyay, waxaana goobta ay xafladda ka soconayso ay tahay mid mashquul badan islamarkaana xilliyada soo socdo la filaayo in xafladda ay si toos ah u bilaabato.